भविष्य र विगत हामीसँग छैन, बर्तमानसँग किन डराउने ? – युवा व्यवसायी ‘विकास पाण्डे’-Nagarikaawaj.com
भविष्य र विगत हामीसँग छैन, बर्तमानसँग किन डराउने ? – युवा व्यवसायी ‘विकास पाण्डे’
आइतवार, बैशाख २८, २०७१
झण्डै ६ वर्ष मात्रै भएको छ व्यवसायमा लागेको । निकै चुनौतीपुर्ण मानिने होटल व्यवसायमा यत्तिको सफल भईन्छ भन्ने सोचाई त्यतिवेला उनलाई थिएन । विकास पाण्डे । उमेर पनि भ्रखरै टिनएजरवाट माथी उक्लिएको जस्तो । २५ वर्षका यि टिनएजर जस्तै देखिने युवा पाण्डे डार्सिज ईन्टरनेश्नल प्रा.ली बुटवलका डाईरेक्टर हुन । प्लस टु सकाएपछि विदेश पुगेर अध्ययन गर्ने चाहाना वोकेर पासपार्ट वनाउन वुटवल फर्किएका उनि यहाँवाट काठमाण्डौं नफर्कने गरि यतै फसे कतै कतै । वुटवलमा पासपोर्ट वनाउने वुक सकिएको थियो, कुर्दा कुर्दा यता न उता भए, हास्दै उनले भने । अहिले उनि सफल व्यवसायीका रुपमा वुटवलमा परिचित हुँदा लाग्छ, त्यतिवेला जुन मिहेनत, साहस गरेको थिए त्यो कहिल्यै भुल्दैनन उनि । आज उनै सफल युवा व्यवसायीसँग भविष्य, विगत र वर्तमानमा होटल व्यवसाय, जिवन दर्शन लगायतमा रहेर रामजी ज्ञवालीले गर्नुभएको कुराकानी –
दिनहरु कसरी वित्दैछन ?
निरन्तर काम जारी छ । विहान उठेदेखी साझँ सम्म अफिसमै वित्छ मेरो समय । तर कहिलेकाही वाहेक घुमफिरलाई पनि अलिकति समय दिन्छु । भ्याएसम्म ईन्टरनेट चलाउन मन लाग्छ । ईन्टरनेटमा सामाजिक सन्जाल फेसवुकले केही वढि मोहनी लगाएको छ । घुम्नको लागी यहाँ त्यत्ती मन लाग्दैन । छोटो समयमा पुगिने ठाउँहरु के पाल्पातिरको चिसो, के लुम्विनी र समय वढि पाए भने पोखरा, काठमाण्डौं जान्छु । तर फुर्सद कम पाउँछु ।
विदेश घुम्न जान ईक्षा छैन भन्या ?
किन नहुनु । मैले तपाईलाई पहिलानी भनेनी, फुर्सद मेरा लागी पाउना जस्तै हो । यदपी समय पाए र भ्याए भने साह्रै घुम्न जान मन लागेको दुवई, लासवेगास, वैकंक र पेरीस हो । यि ठाउँको सयर गर्ने ईक्षा छ छिट्टै पुग्दैछु ।
थोरै व्यवसायमा केन्द्रित रहेर कुरा गरौंन, होटल व्यवसायमा चुनौती वढिनै छ भन्छन् तर तपाई यत्ति सानो उमेरमा पनि यहि चुनौतीपुर्ण व्यवसायमा सफल रुपमा चिनीनुभएको छ त ?
साच्चीकै भन्नुपर्दा २।३ वर्ष अगाडी वुटवलमा भने अनुसार होटल थिएनन् । ससांरमा राम्रो व्यवसाय मध्ये होटल विजनेशलाई पनि मानिन्छ । हु न त धेरै व्यवसायहरु चल्न नसकेर वन्द भएको हामी सवैलाई थाहा छ । तर ति होटल नचल्नुमा राम्रो सर्भिस नहुनु, अव्यवस्थित कोठा र ग्राहकलाई सन्तुष्ट वनाउन नसक्ने खालको व्यवस्थापनले वन्द हुन्छन् । मैले डार्सिज खोल्नुभन्दा अघि मेरो ईक्षासँगै वुवा (गोपाल पाण्डे) को ईक्षा पनि वढिनै थियो । र, आफु हुर्किएको ठाउँको वढि मायाँ लाग्ने । तर यहि ठाउँमा त्यत्ती राम्रो होटल र व्राण्डेड स्टोर नभएपछि हाम्रो ध्यान यतातिर आएको हो । अव व्यवसायमा तपाईले भनेजस्तो चिनीएको छु छैन भन्दा पनि मैले कामलाई भगवान सम्झन्छु । काम गरेपछि सफल भईन्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग वुझेको छु । म फरक सोच भएको मान्छे हुँ पनि भन्न रुचाउँछु ।
फरक सोच भएर मात्रै हुन्छ होला त ?
फरक सोचले मात्रै हुदैन । मेरो आफ्नो वुवा पनि २१ वर्षको उमेरवाट विजनेशमा लाग्नुभएको थियो । उहाँको मिहेनत, लगाव र सहयोगले गर्दा मैले सहयोग पाएको हुँ । हुन त कस्को वुवाले आफ्नो सन्तालाई सहयोग गर्दैन होला । तर पनि मेरो वुवाले मेरो सोचाईलाई कहिल्यै मर्न दिनुभएन । उहाको सहयोग र मेरो सोचको नतिजा आज म जे पाएको छु यहि हो । सोही कारण मैले वुटवलमा राम्रा होटल नहुँदा डार्सिज होलटल सचांलनमा ल्याए । त्यसवाहेक डिपार्टमेन्ट स्टोर, ईन्टरनेश्नल व्राण्डेड स्टोरपनि सचांलनमा ल्याईसकेको छु ।
जिवनको परिभाषा कसरी दिन उत्तम ठान्नुहुन्छ ?
म वर्तमानलाई वढि विश्वास गर्छु । जे गर्नुपर्छ वर्तमानमै गर्नुपर्छ । रमाईला पल, रमाईला क्षण, दुःख सुःखको समिश्रणनै जिवन हो । जिवनमा उतावचढाव धेरै आउँछ । केही दिनअघि नसोचेको घटना भयो । डार्सिज ईन्टरनेश्नल स्टोर चौराहामा चोरी भएको थियो । स्टोर खुलेको एक वर्षमै यो घटना भएपछि अलिकति असुरक्षीत महसुस गरे । व्यवसाय गर्दा असुरक्षीत भईन्छ भने त्यो व्यवसायी टिक्न सक्दैन । त्यहाँ वाट पनि मैले एउटा नयाँ अनुभव सगांले । जिन्दगीलाई जसरी लिईन्छ त्यत्ति सहज छैन । तर वर्तमानवाट डरायौं भने भविष्यमा सफल भईदैन ।
व्यवसाय सफल गर्नमा जिवनसाथीको भुमीका ठुलो हुन्छ भन्छननी ?
हाहाहा… व्यवसाय मात्रै हैन जिवन चलाउनैको लागी जिवनसंगिनीको ठुलो हात, भुमीका रहेको हुन्छ । तर मेरो ध्यान अझै त्यतातिर गएको छैन । भ्रखरै यो व्यवसायमा टिक्दैछु । अझै धेरै काम गर्नुछ, व्यवसायलाई थोरै माथी नपुर्याई विहे गर्नेहो भने फसाद पर्न सक्छकी । त्यसो भएकाले अझै ५ वर्ष विहेतिर ध्यान दिनेछैन । अन्त्यमा ? धेरै कुरा त भैसकेकै छ । मलाई अलिकति स्कुल पढ्दाको याद आयो । हामी सानैदेखी पढ्दै आएको भनाई मिहेनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने आज वल्ल महसुस गरेको छु ।